दशैंकै दिन जाजरकोटबाट आयो सबैलाइ रूवाउने यस्तो खबर! – PathivaraOnline
Home > समाचार > दशैंकै दिन जाजरकोटबाट आयो सबैलाइ रूवाउने यस्तो खबर!
admin October 26, 2020 October 26, 2020 समाचार	0
जाजरकोट : गत असारमा गएको पहिरोमा आमाबाबु र दुई बहिनी गरी घरका चारजना गु’माएर एक्लै बाँ’चेका बारेकोट ४ सार्कीटोलका कृष्णबहादुर सार्कीलाई त्यो पीडाले अहिले पनि पछ्याइरहेको छ।१८ वर्षीय कृष्ण बेलाबेलामा झस्किने गर्छन् । परिवारै गु’माउनु पर्दाको पी’डा त छँदैछ । भावी जीवन कसरी बिताउने चिन्ताछ छन् उनी ।
रातमा चिसोले सताउँछ । खाने अन्न छैन। भएको घर पहिरोले बगाएर लग्यो । विकल्प केही नभएपछि यही त्रिपालमुनी गुजरा चलाइरहेका छौं, जिल्लाको बारेकोट गाँउपालिका ४ गोठगाँउ तलगाँउकी गोरी नेपालीले यी पिडा सुनाइ रहँदा उनको गला अवरुद्ध भयो, आँखा रसाए । अन्नपुर्ण पोस्टमा राजेन्द्र कार्कीले लेख्नु भएको छ ।